Cilmi baaris lagu soo bandhigey in khaniisnimada la kala dhaxlo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sumadda Hbtq. Sawirle: Jennie Persson/Sveriges Radio.
Cilmi baaris lagu soo bandhigey in khaniisnimada la kala dhaxlo
Khaniisnimadu waa fal laga dhaxlo jiilasha hore
La daabacay fredag 5 april 2013 kl 18.04
Waa su'aal muddaba ka fajicineeysey culimada baarta sabata keentay in la kala dhaxlo falalka dadyoowga isku sinjiga ah ee isu galmooda. Hase yeeshee uu ku ogaaday cilmi-baaris uu wax ka sameeyay caalinka Urban Friberg, kuna takhasusay cilmiga hor-u-marka noolaha oo ka howl-gala jaamicadda Uppsala in falalka dadyoowga isku sinjiga ah ee isu galmooda, waxa loo yaqaanno "homosexual-ka" laga raadraaci karo unugyada hiddaha, waxa lagu magacaabo epigenetik - unugyada hiddaha ee la kala dhaxlo.
- Xqaqiiqdii waxaa laga sameeyey cilmi-baarisyo fara badan oo lagu eegey waxyaalaha loo sababeeyn karo sifooyinka ruuxa, hab-dhaqankiisa iyo dhammaan waxyaalaha kala duwan ee hidda-raaca ah. Hase yeeshee aanay ka soo bixin isku xirnaan sifooyinka dadyoowgii baaritaanka lagu sameeyey, qaasatan marka laga hadleyo falalka galmada ee dadyoowga isku sinjiga ah. Middaa ayaa nagu dhalisey inuu tuhun naga galo iney sabab u yihiin wada-shaqeeynta unugyada hiddaha ee la kala dhaxlo (epigenetisk mekanism.
Culuunta unugyada hiddaha ee la kala dhaxlo ayaa ah culuun baaritaankeedu cusub yahay, middaasi oo la xiriirta sida unugyada dhaxalka la isugu gudbiyaa ey u saameeyaan wada-shaqeeyntooda. Amuurtaa oo ey culimada qaarkood qabaan in laga dhaxli karo jiilal hore. Epigenetik- unugyada hiddaha ee la kala dhaxlo ayaa lagu meteli karaa koox muusik wada ciyaarta oo unugyada hiddaha ee la dhaxlaa go'aamiyaan quwadda heesta la tumayo ama unugyada ama goorta ay heestu istaagayso. Sida uu qabo Urban Friberg in falalka khaniis-nimadu yihiin kuwo ey dhaxal isugu gudbiyaan jiilalka kala dambeeya, isla-markaa tuhun laga qabo nidaamka dhabbooyinka waxyaalaha la kala dhaxlo iyo sababta loo kala dhaxlo:
- Ma ahan oo keliya sifooyin galmada un la xiriira. Waxa ey la xiriiraan waxyaalo kala duwan. Oogadayada ayaa ka sameeysan unugyo fara badan oo isu tegey, iyadoona oogadu isku daydo sidii ey u abuuri laheyd noocyo ka duwan ee jiilkii ka horeeyay, si jiil walbaa u yeesho unugyo cusub. Waana tallaabooyin ka baxsan oo keliya wax si kama' ah un u dhaca.
Urban Friberg, oo cilmi-baaristan ey si wada-jir ah u sameeyeen laba caalin oo u dhashey dalka Mareeykanka ayuu goolkiisu yahay sidii loo bayaanin lahaa door-bididda noocyada galmada ee laga helo iyada oo loo mareyo dhanka hidda-raaca unugyada:
- Waxaa dhici karta iney ka careeysiiso dadka qaarkii, hase yeeshee ey dhici karto iney dadka qaarkii u sahasho sidii ey fasiraad ugu heli lahaayeen sababta ka dambeeysa hab-galmoodkooda. Iney jiraan hidda-raac lagu macneeyn karo iyo iney fahmaan noloshooda.
Ulrika Westerlund, gudoomiyaha ururka marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno RFSL, ayaa ka soo hor-jeedda sharraxaadda falalka homosexual-itiga ee lagu sharraxo dhaxalka hiddaha, iyadoona sheegtay in falalka galmadu yihiin kuwo is bedbedela. Waana mid ku adag culimadu sidii ey ku sharrixi lahaayeen:
- Mararka qaarkood ayey culimadu baaritaankooda ku koobaan dadyoowga falalka galmada la sameeya oo keliya ruux ey isku sinji yihiin. Mararka qaarkoodna dadyoow waayo-arag-nimo u leh falal-galmood ee sinjiyo kala duwan iyo wixii la mid ah. Waxaa dhacda in mararka qaarkood ay adag tahay in la macneeyo sida ey culimada bayolojigu sharraxaad uga bixiyaan dhaqanka homosexual-ka. Waxaan qabaa in dad badani u arkaan in falalka galmadu yihiin wax aan meel keliya taagnayn. Wayna adag tahay in la cayimo falalka galmada isku sinjiga ah tusaale ahaan.
Dalka Mareeykanka ayay cilmi-baarista noocan ahi kaalin buuxda ku yeelatay doodda la xiriirta xuquuqda khaniisyada, iyadoo ey qaar badan ee dadyoowgaa ka mid ahi tusaale u soo qaataan fikirrada culimmada kolka ey xuquuq mideeysan u doodeyaan. Halka ey doodaha dalkan Iswiidhen ka jiraa ka ballaaran yihiin middaa oo diiradda la saaro in aan cidna faqooq lagu saarin haddey noqon lahayd dhanka falalka galmada, diinta la aamin-san yahay, dhanka sinjiga (rag iyo haween), waana mid ay Ulrika Westerlund ku qanac-san tahay:
- Dhaqdhaqaaqa ururrada u dooda xuquuqda dadyoowga HBT-ga ee dalka Mareeykanka ama qaar kuwaa ka mid ah waxey mararka qaarkood gacmo-furan ku soo dhoweeyaan noocyada cilmi-baarisyadan oo kale. Waa kuwo lagu doodo oo laga dhigto markhaati. "Waa wax aan ku dhashay, sidaa daraadeed waa inaan xuquuqdeeyda ku helo sida aan u dhashay". Hase yeeshee waxaan annagu qabnaa in middaasi tahay dhabbo halis ah. Waayo haddii uu berito soo baxo caalin kale oo sheega in middaasi aaney dhab aheyn, waxaa imanaysa in xuquuqdii halkaa lagu waayo maadaama la kala dooran karo.
Ulrika Westerlund ayaa carabka ku adkeeysay in la kala saaro cilmi-baarista hab-galmoodka iyo doodaha la xiriira sinnaanta xuquuqda shakhsiga:
- Wax dhibaato ah kuma sugna in la sameeyo cilmi-baarisyo kala duwan. Hase yeeshee midda muhiimadda ku fadhida waxay tahay in aan la isku xirin cilmi-baarista iyo doodda la xiriirta xuquuqda dadyoowga qaarkii, sida ay sheegtay.